ပန်ကရိယ၏ပန်ကရိယရောဂါအတွက်အစားအစာ: ရောင်ခြင်းလက္ခဏာများ, အစားအစာ menu, ချက်ပြုတ်နည်းများ | တရားဝင် site Keto Guru
ပန်ကရိယ pancreatitis နမူနာ menu ကိုများအတွက်အစားအစာ
နေ့စဉ်အဆီ / စပ်အစားအစာများကိုစားခြင်း။
ကာလဝှိုက်အူဆိုက်ရောဂါ၊ ကျောက်တုံးကျောက်ခဲရောဂါအပါအ ၀ င် biliary လမ်းကြောင်း၏ရောဂါများ။
ပန်ကရိယရောဂါပိုမိုဆိုးရွားလာခြင်းနှင့်အတူမူးယစ်ဆေးဝါးကုသမှု၊ အစာရှောင်ခြင်း၊ အစာအိမ်မှအပျက်အစီးများကိုဖယ်ထုတ်ခြင်းမှအကျိုးသက်ရောက်မှုအနည်းငယ်သာရှိပါကခွဲစိတ်ကုသမှု (ပန်ကရိယ၏နံရံဖွင့်လှစ်ခြင်း) အတွက်လိုအပ်သည်။
နာတာရှည်ပန်ကရိယအရက်အလွန်အကျွံသောက်ခြင်း၊ glucocorticoid ဟော်မုန်းများ၊ အက်စထရိုဂျင်များ၊ မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုကာလကြာရှည်စွာအသုံးပြုခြင်း၏သက်ရောက်မှုကြောင့်ပိုမိုဆိုးရွားသည့်အသည်း (လူကြီးများတွင်ပုံမှန်အစားအစာများကိုလိုက်နာရန်လိုအပ်သည်) နှင့်သည်းခြေနှင့်ဆိုင်သောရောဂါများကြောင့်ဖြစ်သည်။ကိုယ်ဝန်အဆုံး၌အမျိုးသမီးများ၏ဝမ်းဗိုက်အတွင်း၌ဖိအားများပြားလာခြင်းနှင့်အတူပန်ကရိယရောင်ရမ်းလာနိုင်သည်။
သူတို့ဟာတစ်ရက်စာစားဖို့ ၂-၄-၄ ရက်လောက်အစာမစားဘဲထွက်ရကြသည်။
ဂျုံပေါင်မုန့်သို့မဟုတ်အခြောက် (စေးကပ်မှုမရှိသော) - တစ်နေ့လျှင် ၅၀ ဂရမ်၊
ဂျယ်လီ၊ သစ်သီးဖျော်ရည်များ (သူတို့အား cranberries သို့မဟုတ်အနက်ရောင် Currant မှချက်ပြုတ်လျှင်ကောင်းသည်);
ဓာတ်ငွေ့မရှိဘဲ Currant သို့မဟုတ် cranberry ဖျော်ရည် (၂း၁) အပါအ ၀ င်အနည်းဆုံး ၂. ၅ လီတာအရည်ကိုဆက်လက်သောက်သုံးသင့်သည်။ အမျိုးမျိုးသော decoctions (ဥပမာ rose rose hips) ။
ပန်ကရိယရောင်ရမ်းခြင်းလက္ခဏာများကိုနောက်တဖန်မတွေ့ပါက၊ ၃-၅ ရက်ကြာသောအစားအစာကိုထည့်ပါ။
ဆားငန်ဆန်သို့မဟုတ် oat ဟင်းရည်;
ဖျော်ရည်များမှအရည် - ဂျယ်လီသို့မဟုတ်ဂျယ်လီ၊
အရည်သီးနှံ: oatmeal, semolina, buckwheat, ဆန် (အရာအားလုံးရေသို့မဟုတ်နို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားသည်, အရာအားလုံးကြိတ်ဆုံနှင့်ရောနှောနေခြင်းနှင့်အတူကုန်တယ်ရန်လိုအပ်သည်);
ရေနွေးငွေ့အမဲသား (အသားကြိတ်စက် / အရောအနှောမှတဆင့်ဖြတ်တောက်ခြင်းသို့မဟုတ်သိုလှောင်ခြင်း)
ဟင်းသီးဟင်းရွက် purees (အာလူး၊ zucchini၊ ဖရုံသီး၊ မုန်လာဥကောင်းကောင်း၊ ဆီအနည်းငယ်ထပ်ထည့်နိုင်သည်)
ဟင်းသီးဟင်းရွက် Puddings (steamed);
လက်ဖက်စိမ်းသို့မဟုတ်အနက်ရောင်လက်ဖက်ရည် (အားနည်းသော) အရည်၊ သကြားသို့မဟုတ်ပျားရည်တို့ကိုထည့်ပေါင်းနိုင်သည် - ၁ Tsp တစ်ခုချင်းစီ၊ နို့၊ beet ဖျော်ရည်နှင့်တစ်နေ့လျှင် ၅၀ မီလီမီတာဓာတ်သတ္တုရေဖြင့်ထည့်နိုင်သည်။
ကယ်လိုရီပါဝင်မှုသည်တစ်နေ့လျှင်ကယ်လိုရီ ၁၀၀၀၊ ပရိုတင်း ၅၀ ဂရမ်၊ ပရိုတင်း ၂၅၀ ဂရမ်အထိ - ဘိုဟိုက်ဒရိတ် ၁၀ ဂရမ်ထိတစ်နေ့လျှင်အဆီများပြားသည်။ညအချိန်တွင်သင်သည်ဝမ်းချုပ်ခြင်းကိုဖယ်ရှားရန်ပျားရည်၊ စပျစ်သီးပျဉ် (1 Tsp)၊ တံစဉ်များကို (2-3 pcs ။ ) သို့မဟုတ်ဒိန်ချဉ်ဖြင့်ရေတစ်ခွက်သောက်ရန်လိုအပ်သည်။
တိုက်ခိုက်မှုပြီးနောက် ၁၀ ရက်မြောက်နေ့ မှစ၍ သင်တစ်နေ့လျှင်ကယ်လိုရီ ၁၀၀၀ ကျော်ပါသောဂရမ်ကို ၃၀၀ ဂရမ်အထိတိုးနိုင်သည်။- ၆၀ ဂရမ်အထိဘိုဟိုက်ဒရိတ်။- ပရိုတင်း၊ တစ်နေ့လျှင် ၂၀ ဂရမ်အထိ - အဆီများ။သူတို့က mashed unsalted အစားအစာကိုဆက်လက်။
အောက်တွင်ရက်ပေါင်းများစွာရှိသောမီနူးတစ်ခုသည်ခွင့်ပြုထားသောထုတ်ကုန်များစာရင်းပေါ် အခြေခံ၍ အလားတူအစားအစာကိုသင်ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
နေ့ရက်များ အစာစားခြင်း ပန်ကရိယရောဂါအတွက်ခန့်မှန်းခြေအစားအစာမီနူး
၁ ရက် မနက်စာ Semolina သို့မဟုတ်ဆန်ဂျုံယာဂု (ရေပေါ်မှာ) - 150 ဂရမ်, သစ်သီးများ: လိမ္မော်ရောင်သို့မဟုတ်ပန်းသီး။လက်ဖက်စိမ်း (ခိုင်မာမှုမရှိ) ပျားရည်နှင့်သုံးနိုင်သည် (၁ Tsp ။ )
နံနက်စာမနက်စာ ရွှေဖရုံသီးသန့်စင် - 50 ဂရမ်။ , ကြက်သားရင်သားကင်ဆာသို့မဟုတ်ငါး cutlets ။Rosehip သောက်စရာ (စာရွက်သည်အောက်တွင်ရှိသည်), ပျားရည် - 1 Tsp ။
ညစာ ငါးသို့မဟုတ်အမဲသားအသားနှင့်အတူဟင်းသီးဟင်းရွက်ဟင်းရည် 200 ဂရမ်, Mashed အာလူးသို့မဟုတ်ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်း - 100 ဂရမ်, အဖြူရောင်ပေါင်မုန့် crouton ။အချိုပွဲအတွက်ပန်းသီးတစ်လုံးကိုပျားရည်ဖြင့်ဖုတ်နိုင်သည်၊ အရေပြားမရှိဘဲအမြဲဖုတ်နိုင်သည်။
နေ့လည်စာ ပျားရည်နှင့်အိမ်တွင်းဒိန်ခဲအနည်းငယ် (၁% ဆီဥ)
ညစာ ကြက်ဥ ၃ ခု၊ခွင့်ပြုထားသောဟင်းသီးဟင်းရွက်များမှခရမ်းချဉ်သီး - ၁၅၀ ဂရမ်၊
အိပ်ချိန်မဝင်ခင် ပြုတ်ရေ - ပျားရည်နှင့်အတူ 1 ခွက် - 1 Tsp ။သို့မဟုတ်ထောပတ်နို့။
နေ့2မနက်စာ နို့နှင့် Oatmeal ဂျုံယာဂု - 150 ဂရမ်။Kissel (သို့) လက်ဖက်စိမ်းအစိမ်း (မသန်ဘူး)
ညစာ ဖရုံသီးသို့မဟုတ်ပန်းဂေါ်ဖီစင်ကြယ်သောဟင်းချို။Minced ကြက်သား meatballs
နေ့လည်စာ ခြောက်သွေ့သောမချိုသောကွတ်ကီးများ ၁-၂ ချပ်ပါသောလက်ဖက်စိမ်း
ညစာ ဆန် - ထောပတ်ပေါင် ၁၅၀ ဂရမ်။လက်ဖက်ရည်သို့မဟုတ်ဂျယ်လီ
အိပ်ချိန်မဝင်ခင် Rosehip decoction - 1 ဖန်ခွက်
နေ့3မနက်စာ စပါးရည်ဂျုံယာ - ၁၅၀ ဂရမ်လက်ဖက်စိမ်းနှင့်ခိုင်မာသောလက်ဖက်ခြောက်သွေ့သောဘီစကွတ်များ
နံနက်စာမနက်စာ 1 ဖုတ်ပန်းသီး
ညစာ မုန်လာဥနီ၊ မုန်လာဥ၊ ပန်းဂေါ်ဖီ၊အခြောက်လှန်းအသီး compote
နေ့လည်စာ Cottage cheese - ၁၀၀ ဂရမ်လက်ဖက်စိမ်း
အိပ်ချိန်မဝင်ခင် နို့လက်ဖက်ရည်သို့မဟုတ် kefir
အသုံးပြုနိုင်တယ်ပန်ကရိယရောဂါ၏စူးရှသောတိုက်ခိုက်မှုပြီးနောက်အစားအစာအရေအတွက်က 5pနှင့်တစ်နှစ်တစ်လျှောက်လုံးကစောင့်ရှောက်မည်။ဆားမပါဘဲ၊ စင်ကြယ်သောအစားအစာကိုစားသည်၊ ပရိုတိန်းများကို ၁၀၀ ဂရမ်၊ ၄၀ ဂရမ်အထိတိုးနိုင်သည်။- အဆီ, 450 ဂရမ်အထိ။- ဘိုဟိုက်ဒရိတ်။သင့်ဆရာဝန်မှသတ်မှတ်ထားသောအကြံပြုချက်များနှင့်အစီအစဉ်ကိုလိုက်နာရန်သေချာပါစေ။
ထိုဟင်းရည်အတွက်, သင် 0.5ကီလိုဂရမ်ခြောက်နှင်းဆီတင်ပါးနှင့်ရေ4လီတာလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။အဆိုပါ rosehip ဆေးကြောရေ add,4ရက်အတွင်းမသွားအောင်သောက်ထား။သင်ပြုတ်ရည်ချက်ပြုတ်ရန်မလိုအပ်ပါ, rosehip အခန်းအပူချိန်မှာရေနှင့်အတူထုံမွှန်းရပါမည်။ဒီသောက်စရာတွင်ဗီတာမင်စီပါရှိသည်။အာရုံစူးစိုက်မှု!သောက်ခြင်းသည်အချဉ်ပေါက်နေသောကြောင့်၎င်းကိုမသောက်မီသင့်ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ပါ။
ဟင်းချိုအတွက်ငါး ၀. ၅ ကီလိုဂရမ်သည်အသုံး ၀ င်သည် (ရေမွှေး ၁ လီတာ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဟင်းရည် ၅၀ မီလီမီတာ (အသားမပါသောအသားလွှာများ၊ ကော့ဒ်ငါးများ၊ ပိုက်များ၊ ရေပုံးများ)၊ ၁. ၅ လီတာရေသို့မဟုတ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဟင်းရည်ကိုယူသင့်သည်။နို့, 1 Tsp ။ထောပတ်။
ငါးကိုဖြတ်, ပြီနောက်ဟင်းအတွက်ရေသို့မဟုတ်ဟင်းရည်ကိုငါသွန်းလောင်းနူးညံ့သည်အထိချက်ပြုတ်။ဒယ်အိုးထဲမှငါးများကိုဖယ်ထုတ်ပြီး Blender နှင့်ခုတ်ပါ။ပြီနောက်ဟင်းထဲမှနို့အနည်းငယ်ကိုအပူပေးပါ။ ထောပတ်ထည့်ပါ။ ထောပတ်အရည်ပျော်သွားသည်နှင့်အမျှဟင်းရည်ကိုထည့်ပါ၊ ဆူအောင်တည်ပါ။ သို့သော်မဆူပါနှင့်။ငါးများကိုထည့်ပါ၊ အပူနည်းနည်းဖြင့်ချက်ပြုတ်ပါ။သင့်ရဲ့ဆရာဝန်ကခွင့်ပြုမှသာဆားကိုထည့်နိုင်သည်။
ပဲပင်များ၊ ဖွဲနုများ၊ ဂေါ်ဖီထုပ်၊ မုန်လာပင်၊ သစ်သီးနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များအခွံ / အရေခွံများ၊
ကစော်ဖောက်ခြင်းတုံ့ပြန်မှုများနှင့်အတူကာဗွန်နိတ်အချိုရည်များ kvass, kefir ။
နာတာရှည်ပန်ကရိယရောဂါသည်နေ့လည်စာစားပြီးလျှင်ချက်ချင်းဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီး၊ ၎င်းတွင်မီနူးပါဝင်သောကြက်ဥ၊ pastries၊ သစ်သီးဝလံ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ ဖျော်ရည်၊ အအေးဆိုဒါ၊ ချောကလက်၊ နို့သို့မဟုတ်ရေခဲမုန့်ပါဝင်သည်။ရောဂါ၏အပေါင်းပါများအနေဖြင့် ၀ မ်းဖျားခြင်း၊ ဖောင်းပွခြင်းသို့မဟုတ် ၀ မ်းနည်းခြင်းခံစားမှု၊ "ရင်ဘတ်အောက်ပိုင်း၌ကပ်နေသောအဖုများ"၊
နာတာရှည်ပန်ကရိယရောဂါနောက်ခံတွင်၊ ဆီးချိုရောဂါသည်အလွယ်တကူဖွံ့ဖြိုးပြီးတိုးတက်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်ပြင်းထန်သောရောဂါလည်းဖြစ်သည်၊
ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဟင်းချို (ဖရုံသီး၊ အာလူး၊ zucchini သို့မဟုတ်မုန်လာဥများသည်ဟင်းချိုအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်);
သီးနှံဟင်းချိုများ (semolina, oatmeal, buckwheat သို့မဟုတ်ဆန်နှင့်);
အသား - အမဲသားသို့မဟုတ်နွားငယ်သား, ကြက်သား, ယုန်။ရေနွေးငွေ့, မုန့်ဖုတ်သို့မဟုတ်ဆူပွက်ဖို့သာ။ ကောင်း၏။
ကြက်ဥမှရေနွေးငွေ့ omelettes (2-3 PCs ။ ) ။
အနိမ့်အဆီငါး - အစိုင်အခဲ၊ Pollock၊ ကော့ဒ်၊ ပုံမှန်အတိုင်း၊
ထောပတ် (ဆားမပါ) - လတ်ဆတ်သောအစားအစာများကိုစားနိုင်သည်၊
ဒိန်ခဲ - အဆီနည်းသော၊
ချဉ်သောမုန့်, ကဆီဖရီ (အဆီနည်းနည်းသာ);
ဂျုံယာဂု - ဆန်၊ ပုလဲမုယော၊ oatmeal၊ buckwheat, noodles (၎င်းတို့၏ရှေ့နောက်ညီညွတ်မှုသည်အရည်သို့မဟုတ်တစ်ဝက်အရည်ဖြစ်သင့်သည်);
ဟင်းသီးဟင်းရွက်သန့်စင် / စွပ်ပြုတ်များ (ဂေါ်ဖီထုပ်နှင့်ခရမ်းချဉ်သီးများမထည့်နိုင်ကြောင်းမမေ့ပါနှင့်), ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုရိုးရှင်းစွာပြုတ်။ ဖုတ်နိုင်သည်။
သစ်သီးဖျော်ရည်များမှသစ်သီးဖျော်ရည်များ / သစ်သီးခြောက်များ၊ သစ်သီးခြောက်များမှသစ်သီးများ (apricots, pears, ပန်းသီး)
မနက်စာ Steamed အမဲသား (ကြက်၊ အမဲသား) ။Rosehip လက်ဖက်ရည်သို့မဟုတ် decoction
နေ့လည်စာ နို့နှင့်အတူ Oatmeal ။ဟင်းရည်သို့မဟုတ်နှင်းဆီတင်ပါး၏ပြုတ်ရည်
နေ့လည်စာ ကလေးအစားအစာ ၁ အိုး
ညစာ မုန်လာဥနှင့်အတူဟင်းသီးဟင်းရွက် zucchini စွပ်ပြုတ်။အသားပြုတ်ကြက်သားတစ်ဖဲ့။အခြောက်လှန်းအသီးကိုသီး compote
ညအခါမှာ kefir တစ်ခွက်
အသား၊ ငါး၊ အဆီအမျိုးမျိုးရှိသောကြက်၊ မီးခိုးအသားနှင့်ငါး၊ ဝက်အူချောင်း၊
အသား၊ မှို၊ ငါးဟင်းရည် (၄ င်းတို့ပေါ်ရှိဟင်းချိုများနှင့်ဝက်အူချောင်းများ)၊
ဂေါ်ဖီထုပ်ဟင်းချို, borscht အဖြစ်အအေးကြက်သွန်နီ (ဥပမာ - အအေးမိသို့မဟုတ် okroshka);
ငါး၊ အသားကင်၊ မီးခိုး၊ ဆား၊
ကြက်ဥ - ကြက်ဥကြော်မစားနိုင်၊
ကြက်သွန်ဖြူ၊ နှာရည်၊ ဟင်းနုနွယ်ရွက်၊ မှို၊ ငရုတ်ကောင်း၊
ကိတ်မုန့်ထုတ်ကုန်များ၊ လတ်ဆတ်သောပေါင်မုန့်၊ ချိုမြိန်မှု၊
endocrine ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အတူပန်ကရိယအတွက်ယို၊ သကြားနှင့်ပျားရည်တို့ကိုဖယ်ထုတ်ပြီးကုထုံးဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိပါ။ ဘိုဟိုက်ဒရိတ်ကိုရည်ညွှန်းသည်။
ရောဂါလက္ခဏာမပြသည့်ရောဂါလက္ခဏာသို့မဟုတ်နူးညံ့သောလက္ခဏာများရှိနေခြင်းနှင့်အတူတားမြစ်ထားသောဟင်းလျာများ / ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများစာရင်းကိုကန့်သတ်ထားသင့်သော်လည်းလုံးဝဖယ်ထုတ်မထားသင့်သောထုတ်ကုန်များအမျိုးအစားသို့ဖြည်းဖြည်းချင်းလျှော့ချသည်။
ဟင်းချိုအတွက်သင်လိုအပ်သည်မှာ - အဝါရောင်သို့မဟုတ်အစိမ်းရောင်ငရုတ်ကောင်း 1, broccoli, cauliflower, zucchini 1 သေးငယ်သည်။ဟင်းသီးဟင်းရွက်များအားလုံးကိုဆေးကြောပြီးလျှင် Cube များခွဲပေးပါ။ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုရေ (၁-၁. ၅ လီတာ) ဖြင့်ရေလောင်းပြီးလျှင်နူးညံ့သည့်အထိချက်ပြုတ်ပါ။တစ် ဦး Blender နှင့်အတူယိုစီးမှုနှင့်စင်ကြယ်သော။
သင်လိုအပ်သောပန်းကန်ကိုပြင်ဆင်ရန် - ငါး (၄၀၀ ဂရမ်)၊ ရေ ၁၀၀ မီလီမီတာ၊ ဂျုံမှုန့်တစ်ဇွန်း၊ ကြက်ဥ ၂ လုံး (အဖြူများကိုအဖြူနှင့်ခွဲထုတ်သည်)၊ ထောပတ်အပိုင်းအစ (၂၀ ဂရမ်) ။ငါးကိုရေတွင်ပြုတ်ပါ၊ ရှုတ်ချပါ၊ အသားကြိတ်စက်ကိုလှိမ့ ်၍ လှန်ပါ။
နို့နှင့်မုန့်ညက် (နည်းနည်းအဝါရောင်သည်အထိဒယ်အိုးထဲမှာမုန့်ညက်ကိုအပူပေးပြီး) ရောထွေးသင်အနည်းငယ်ထူသောနို့ "ငံပြာရည်" ရ။ယခုငါတို့ရောနှောစတင်ခြင်း: ငါး၊ ကြက်ဥအနှစ်၊ နို့ငံပြာရည်၊ ထောပတ် (သင့်ဆရာဝန်ကခွင့်ပြုလျှင်သင်ဆားထည့်နိုင်သည်) ။
180-200 ဒီဂရီမှမီးဖို Preheat ။ငါးအစုလိုက်အပြုံလိုက်ကိုမုန့်ဖုတ်ထားသောပန်းကန်လုံးတွင်သို့မဟုတ်မုန့်ဖုတ်စာရွက်ထဲသို့ထည့်ကာမီးဖို၌ထားပြီးလျှင်နူးညံ့သည့်တိုင်အောင်ဖုတ်ရမည်။
Apple က marshmallow (အချိုပွဲ)
marshmallow ကိုပြင်ဆင်ရန်၊ ပန်းသီး ၁ ကီလိုဂရမ်ကိုယူပြီးလျှင်၊ ၎င်းတို့ကိုအခွံခွာပြီးဖြတ်ယူပါ။ပန်းသီးကိုပြုတ်, အပူထဲကနေဖယ်ရှား, ရေစစ်ထုတ်ပေးရန်, အနည်းငယ်အေးကြကုန်အံ့။ပန်းသီးများကိုဆန်ခါတဆင့်ပွတ်ပေးပါ။
ရရှိလာတဲ့ puree ကနေဖျော်ရည်အားလုံးကိုညှစ်ပါ, ထိုသန့်စင်ညှစ်။သီးဖျော်ရည်ကိုသေးငယ်သောအိုးထဲသို့ထည့်ပြီးထူထဲ (ချက်ပြုတ်ရည်လို) ထူပြီးချက်ပြုတ်ပါ။သကြား (၁၀၀ ဂရမ်) ကိုအသားပြုတ်ဖျော်ရည်ထဲသို့လောင်းကာအနည်းငယ်ပြုတ်ပါ။အသီးဖျော်ရည်ကို puree နှင့်ရောပါ။
ရရှိလာတဲ့အစုလိုက်အပြုံလိုက်ကိုမုန့်ဖုတ်စာရွက်ပေါ်တွင်ထားကာမီးဖို၌ (၁၂၀ ဒီဂရီ) ထားပါ။ ပြီးလျှင်အထူကိုထူပြီးသည်အထိ Pastille ကိုခြောက်စေပါ။
တစ်ပါတ်အတွက်ပန်ကရိယရောဂါအတွက်နမူနာ menu: အစားအစာရွေးချယ်စရာများနှင့်အာဟာရဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများ
ရောဂါကိုစူးရှသောတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုအနေဖြင့်ပထမရက်အနည်းငယ်အတွင်းအစာရှောင်ခြင်းအထိအစားအသောက်သည်အလွန်ကန့်သတ်ချက်ရှိသည်။ရောဂါ၏စူးရှသောရောဂါလက္ခဏာများကိုဖယ်ရှားပြီးနောက်လူနာ၏ menu သည်တဖြည်းဖြည်းကျယ်ပြန့်လာသည်။နာကျင်တဲ့ပန်ကရိယနဲ့လူတစ်ယောက်ကိုအပတ်စဉ်အစားအစာဘယ်လိုကြည့်ရမယ်ဆိုတာကြည့်ရအောင်။
ပြင်းထန်သောရောင်ရမ်းခြင်းများတွင်အစားအသောက်သည်အလွန်တင်းကျပ်သည်။ရောဂါဖြစ်ပွားမှု၏ပထမနေ့တွင်လူနာသည်ငတ်မွတ်နေသည်။ရောဂါ၏ပြင်းထန်မှုအပေါ် မူတည်၍ ရောဂါလက္ခဏာများ၊ အစာရှောင်ခြင်းသည်တစ်ရက်မှသုံးရက်အထိလေးရက်အထိကြာနိုင်သည်။ထိုကဲ့သို့သောအတိုင်းအတာများအတွက်လိုအပ်သည်:
ဂလင်းရောင်ရမ်းခြင်းနှင့်အတူရောင်ရမ်းခြင်း, ကိုယ်တွင်းကလီစာတွေကို spasm နှင့်၎င်း၏ပြွန်လေ့လာသည်။ဤအကြောင်းကြောင့်အစာခြေအင်ဇိုင်းများသည်ပန်ကရိယမှအူထဲသို့မရောက်ရှိနိုင်ပါ၊ ၎င်းတို့သည်ဂလင်း၌တက်ကြွ။ ၎င်း၏နံရံများကိုအစာကြေသည်။
စူးရှသောပန်ကရိယရောဂါ၏ ၂ ရက်မှ ၅ ရက်အတွင်း၊ အရည်များကိုသာအသုံးပြုကြောင်းညွှန်ပြသည် - ၂. ၅ လီတာအထိ။OP နှင့်အတူငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုမှထွက်ခွာပြီးနောက်အစားအစာစားပွဲနံပါတ် ၅ P (၁) အရ၊
တစ်ချိန်တည်းတွင်အစားအစာ၏ပထမဆယ်ရက်အတွင်းကယ်လိုရီပါဝင်မှုသည် 800 Kcal ထက်မပိုစေသင့်ပါ။ဆယ်ရက်မြောက် နေ့မှစ၍ အပြုသဘောဆောင်သောကုသမှုအရှိန်အဟုန်ဖြင့်အစားအစာ၏ကယ်လိုရီပါဝင်မှုသည် 1000 kcal အထိတိုးမြှင့်နိုင်သည်။
ရောဂါ၏နာတာရှည်ပုံစံတွင်လူနာ၏ menu သည်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သည်။၎င်းတွင်စီရီရယ်၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်သစ်သီးအမျိုးအစားများ၊ အသားနှင့်ငါး (ဖက်တီး၊ အလယ်အလတ်အဆီအမျိုးအစားများမဟုတ်)၊ နို့ချဉ်၊ မွှေးသောကွတ်ကီးများ၊ ချိုမြသောသီးမှဂျယ်လီများ၊
အစားအစာများကိုအပိုင်းအစငယ်ဖြင့်ပြုလုပ်သင့်သည်။ တစ်နေ့လျှင် ၅ ကြိမ်မှ ၆ ကြိမ်အငယ်စားများ။
ဒါဟာ၎င်း၏ပိုကောင်းဝါးမြိုခြင်းအဘို့, အစားအစာ, ကုန်တယ်ခံရဖို့နှစ်လိုဖွယ်ဖြစ်ပါသည်။
ခွင့်ပြုထားသောချက်ပြုတ်နည်း - ချက်ပြုတ်ခြင်း၊ မုန့်ဖုတ်ခြင်း၊
ဒါဟာမုန့်နှင့်အတူမုန့်ဖုတ်မုန့်ညက် (လတ်ဆတ်သောသို့မဟုတ်ဒုတိယ crackers ၏နေ့ကထက်ပိုကောင်း), လတ်ဆတ်သောမုန့်ကိုစားရန်အကြံပြုသည်မဟုတ်။
အရက်၊ မုန် (ချစ်ပ်များ၊ crackers များ၊ ပြောင်းဖူးများစသည်တို့) ကိုတင်းကြပ်စွာတားမြစ်သည်။
ရောင်ရမ်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်၏ပိုမိုဆိုးရွားစေဘို့နမူနာ menu ကို
ဆေးဖက်ဝင်ဓာတ်သတ္တုရေသောက်သုံးခြင်းသည်တစ်နေ့လျှင်လေးကြိမ်မှငါးကြိမ် (200 ml) ဖြစ်သင့်သည်။ သောက်ခြင်းသည်အနည်းငယ်နွေးနေစဉ် (၂၇ ဒီဂရီအထိ) ဖြစ်သည်။အကယ်၍ ရေသည်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ဖြစ်လျှင်၎င်းကိုမသောက်မီနာရီဝက်ခန့်သို့မဟုတ်တစ်နာရီအကြာတွင်ဖန်ခွက်ထဲသို့သွန်းလောင်းသင့်သည်။ သို့မှသာဓာတ်ငွေ့အားလုံးအရည်မှထွက်လာလိမ့်မည်။
သုံးရက်မြောက်သောနေ့၌၎င်းသည် rosehip ဟင်းရည်အားနည်းခြင်းနှင့်အမျိုးမျိုးကွဲပြားနိုင်သည်။သောက်ခြင်းသည်ရေမျှမျှတတရှိစေခြင်း၊ ခန္ဓာကိုယ်၏သယံဇာတများကိုလိုအပ်သော microelement များဖြင့်ပြန်လည်ဖြည့်တင်းခြင်းနှင့်အဆိပ်များကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်သည်။
ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးခြင်းဘေးမှထွက်သွားသည့်အခါ (၂၊ ၃၊ ၄ ရက်) ပန်ကရိယရောဂါရှိသည့်လူနာများအတွက် menu ကိုအောက်ပါထုတ်ကုန်များဖြင့်ခွဲခြားနိုင်သည်။
အဖြူဂျုံပေါင်မုန့် (တစ်နေ့လျှင် ၅၀ ဂရမ်ထက်မပို);
ဂျယ်လီသို့မဟုတ်အနက်ရောင် Currant အသီးကိုသောက်;
တစ်ချိန်တည်းမှာပင်တစ်နေ့လျှင် ၂. ၅ လီတာအရည်အထိသောက်ရန်လိုအပ်သည် (ဓာတ်သတ္တုရေ၊ ဂျယ်လီ၊ သစ်သီးဖျော်ရည်၊ rosehip decoction) ။
တတိယ (သို့) ပဉ္စမနေ့၌အစားအစာကို -
ဆန်သို့မဟုတ် oatmeal ထံမှချောရှေ့နောက်ညီညွတ်မှု၏ decoction;
ဘလူးဘယ်ရီကနေဂျယ်လီ, Currant အနက်ရောင်, စတော်ဘယ်ရီ, blueberries;
buckwheat, ဆန်, oatmeal ထံမှရေ၌ဂျုံယာဂု။
တစ် ဦး Blender နှင့်အတူကုန်တယ်ရေနွေးငွေ့သို့မဟုတ်ပြုတ်ကြက်သား, ယုန်, ကြက်ဆင်;
ဟင်းသီးဟင်းရွက် puree (ဖရုံသီး, မုန်လာဥ, zucchini);
မခိုင်မာတဲ့အနက်ရောင်သို့မဟုတ်အစိမ်းရောင်လက်ဖက်ရည်၊ တံစဉ်များကို၊ ဒိန်ချဉ်။
ဆယ်ရက်မြောက် နေ့မှစ၍ အောင်မြင်သောကုသမှုခံယူပြီးရောဂါလက္ခဏာများကိုထောက်ပံ့ပေးခြင်းဖြင့်မီနူးသည်ဆားမပါသောထောပတ်၊ ဂျယ်လီ၊ ဖုတ်ထားသောပန်းသီး၊ အဆီနည်းနည်းသောငါးများသို့မဟုတ်ရေနွေးငွေ့ငါးအသားများ၊သကြားကိုအလွန်နည်းသောပမာဏဖြင့်စတင်သုံးစွဲခွင့်ပြုသည်။သို့သော်အစားထိုးယူခြင်းကပိုကောင်းသည်။
ပန်ကရိယရောင်ရမ်းခြင်းအတွက်အစားအစာသည်အလွန်တင်းကျပ်သောကြောင့်မီနူးတွင်အောက်ပါအစားအစာများကိုလုံးဝဖယ်ထုတ်ထားသည်။ ကြော်၊ မီးခိုး၊ အလွန်ဖက်တီး၊ အစားအစာ၊ မှို၊ , အရက်, ဆိုဒါ, မုန်လာဥ, ကြက်သွန်, ကြက်သွန်ဖြူ, မုန်လာဥ, ဟင်းနုနွယ်ရွက်, ပဲ, ပဲ, ကညွတ်, sorrel ။
တစ်ပါတ်အတွက်စူးရှသောပန်ကရိယရောင်ခြည်ရှိလူနာတစ် ဦး ၏မီနူးတွင်အစာခြေလမ်းကြောင်းအတွက်ခွင့်ပြုပြီးအန္တရာယ်ကင်းသောအစားအစာများသာပါဝင်သင့်သည်။
အစောပိုင်းမုန့်ညက် - ကြက်ဥအနှစ် ၂ ခု၊
နှောင်းပိုင်းတွင်ဘောဇဉ်: berry သီးဂျယ်လီ။
နေ့လည်စာစားချိန် - ဆန်ဟင်းချို၊ ပေါင်မုန့်၊ ပေါင်မုန့်၊
နေ့လည်စာ - မုန့်ချိုအိတ်ချပ်များ၊
ညနေခင်း - ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့်ငါးပုဇွန်ကြော်၊
နှောင်းပိုင်းညနေခင်း - ဒိန်ချဉ်နှင့်ကောက်ကျစ်သူများ။
အစောပိုင်းအစားအစာ - ထောပတ်ပေါင်ဒါ၊
ညစာစားပွဲတွင် - စတော်ဘယ်ရီလက်ဖက်ရည်ကြမ်း၊
နေ့လည်စာ - ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဟင်းရည်ချက်ပြုတ်၊ crackers၊ ကြက်ဆင်၊ berry mousse ။
နေ့လည်စာ - မုန့်ဖုတ်သောပန်းသီး၊
ညနေခင်း: ခေါက်ဆွဲ၊ ရေနွေးငွေ့ငါးအိုး၊ အစိမ်းလက်ဖက်ရည်။
နှောင်းပိုင်းညနေခင်း: crackers၊ လက်ဖက်ရည်။
အစောပိုင်းအစားအစာ: ဟင်းသီးဟင်းရွက် pudding ။
နေ့လည်စာစား: ဂွမ်းဂျုံဟင်းချို၊ ကောက်ကောက်၊
နေ့လည်စာ - ဖရုံသီးဂျုံယာဂု။
ညနေခင်း - oatmeal၊ ကြက်သားတုံး၊
ညနေနှောင်းပိုင်း - kefir နှင့်ဘီစကစ်
အစောပိုင်းအစားအစာ: ဆန်ဂျုံယာဂု, Currant compote ။
ညစာစားပွဲ - ရေနွေးငွေ့ omelet၊ chamomile decoction ။
နေ့လည်စာ - အသားပြုတ်အသားမုန့်ဟင်းချို၊
ညစာ - oatmeal ဂျုံယာဂု၊ Raspberry soufflé၊ rosehip ဟင်းရည်။
ညစာစားပွဲ: crackers နှင့်ဒိန်ချဉ်။
အစောပိုင်းအစားအစာ: oatmeal ဂျုံယာဂု, အလျင်အမြန်စေလွှတ်ကြက်ဥ, လက်ဖက်ရည်အနက်ရောင်။
ညစာစားချိန် - ဖရုံသီးသန့်ရှင်းသောစပျစ်သီး၊
နေ့လည်စာစားချိန် - buckwheat soup, croutons, fish steams ကိတ်မုန့်၊ လက်ဖက်ရည်။
နေ့လည်စာ: အိမ်တွင်းဒိန်ခဲ casserole, rosehip ဟင်းရည်။
ညနေခင်း - မုန်လာဥနီနှင့်ကြက်သားလက်ဖက်ရည်ကြမ်း၊ အခွံနှင့်အခွံမပါသောဖုတ်ထားသောပန်းသီး၊
ညနေနှောင်းပိုင်း - လက်ဖက်ရည်နှင့်ဘီစကွတ်မုန့်တစ်လုံး။
အစောပိုင်းအစားအစာ: semolina ဂျုံယာဂု, chamomile decoction ။
ညစာစားချိန်တွင်: ရေနွေးငွေ့ omelet, ဂျယ်လီ။
နေ့လည်စာစား: ခေါက်ဆွဲပြုတ်၊ crackers၊ ကြက်သားပြုတ်၊ လက်ဖက်ရည်။
နေ့လည်စာ - Berry soufflé, compote ။
ညစာ - ဟင်းသီးဟင်းရွက်သန့်စင်၊
အစောပိုင်းမုန့်ညက်: မုန်လာဥနီနှင့်ဖရုံသီးသန့်စင်သော၊ ကြက်ဥအဖြူပြုတ်၊
ညစာစားပွဲ - ထောပတ်ညို၊ chamomile decoction ။
နေ့လည်စာစားရသောအချိန် - ရှုပ်ထွေးသောငါးဟင်းချို၊ crackers၊
နေ့လည်စာ - မီးဖုတ်ထားသောပန်းသီး၊
ညနေခင်း - ရေနွေးငွေ့အိုးနှင့်ဂျုံဂျုံယာဂု၊ အသားပြုတ်ထားသည့် beets၊ ဂျယ်လီ။
နှောင်းပိုင်းညနေခင်း - kefir နှင့်အတူလူဆိုးများ။
ရောဂါကူးစက်မှုကိုတည်ငြိမ်သောလွှတ်လွှတ်မှုအဆင့်သို့မကူးပြောင်းမီအစာအားလုံးသည်နံ့သာမျိုးများမပါဘဲပြီးလျှင်ဆားထည့်ရန်မလိုအပ်ပါ။တိုက်ခိုက်မှုအပြီးနှစ်ပတ်အလိုတွင်ရောဂါလက္ခဏာများမရှိပါကသင်သည်လတ်ဆတ်သောပန်းသီးများ၊ အခွံနှင့်ဂေါ်ဖီထုပ်၏ ဦး ခေါင်းအပြင်စတော်ဘယ်ရီ၊
နေ့ အစောပိုင်းမုန့်ညက် သရေစာ နေ့လယ်စာ နေ့လည်စာ ညနေခင်းအချိန်
မွန် အနိမ့်အဆီနို့, ဒိန်ခဲသားညှပ်ပေါင်မု, chicory နှင့်အတူ Oatmeal ထောပတ်ပြွန်၊ ဘီစကွတ်၊ ဘီစကွတ်၊ နှင်းရည်ဟင်းရည် ကြက်သားဟင်းနှင့်အာလူးဟင်းချို၊ ဖုတ်ပန်းသီး, ဂျယ်လီ Buckwheat ဂျုံယာဂု၊ ထောပတ်နှင့်အမဲသား cutlet နှင့်အတူ beet သုပ်
နေ ဆန်နို့ဂျုံယာဂု၊ ဂျယ်လီသို့မဟုတ်လက်ဖက်ရည် ပရိုတိန်း omelet, ပြုတ်ကြက်ဆင်, compote ဒေါင်လိုက်ဟင်းချို၊ ဂျုံပေါင်မုန့်၊ ဖုတ်ထားသောမုန့်၊ ဂျယ်လီသကြားလုံး၊ လက်ဖက်စိမ်း ထောပတ် casserole, chamomile ဟင်းရည် အာလူးပြာများ၊ ဖုတ်ထားသောငါးများ၊ ထောပတ်မုန်သုပ်၊ လက်ဖက်ရည်
ဗုဒ္ဓ Oatmeal, ဂျယ်လီ Berry ဟာ mousse, ရှိနေဆဲဟုဘီစကွတ်, rosehip ဟင်းရည် ငါးဟင်းချို, ဖရုံသီး pudding, crackers, compote ဒိန်ခဲ zucchini နှင့်အတူကြက်ကြော်, အပြုတ်ပန်းဂေါ်ဖီ, လက်ဖက်စိမ်း
ဗုဒ္ဓ Semolina ဂျုံယာဂု, ဒိန်ခဲသားညှပ်ပေါင်မု, ဂျယ်လီ အချဉ်နို့, croutons မုန်လာဥနီ၊ ကြက်ဥကြော်များ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက် pudding, compote ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ ဂျယ်လီ၊
သောကြာ ရေနွေးငွေ့ omelet, အနက်ရောင်လက်ဖက်ရည် မုန်လာဥနှင့်ပြီးလျှင်ပန်းသီး pudding ဟင်းသီးဟင်းရွက်စင်ကြယ်သောဟင်းချို, အမဲသား meatballs, ဂျယ်လီသကြားလုံးနှင့်အတူ chamomile decoction Berry ဟာsoufflé, ဘီစကွတ်မုန့်ဘီစကွတ် meatball, လက်ဖက်ရည်နှင့်အတူပြုတ်ဆန်
Sat. Oatmeal, chicory Omelet, ပန်းသီး compote buckwheat ဟင်းချို, meatloaf, ပြုတ် beet သုပ်, လက်ဖက်ရည် ဒိန်ခဲအသားညှပ်ပေါင်မုန့်နှင့်ပန်းသီး၊ ငါးsoufflé, ပြုတ်ခေါက်ဆွဲ, လက်ဖက်ရည်
နေ ကြက်ဆင်, rosehip ဟင်းရည်နှင့်အတူဆန်ဂျုံယာဂု ဟင်းသီးဟင်းရွက်soufflé, berry သီးဂျယ်လီ ရှုပ်ထွေးနေသောအသားမုန့်ဟင်းချို၊ ငါးမွှေး၊ ပေါင်မုန့်၊ ထောပတ်များ၊ ပန်းသီး၊ ငါးလိပ်, mashed အာလူး, rosehip ဟင်းရည်
အိပ်ရာမဝင်ခင် ၁-၂ နာရီအလိုတွင်သင်သည်ကွတ်ကီးနှင့်အတူကန့်သတ်ထားသောနို့ထွက်ပစ္စည်း (ဒိန်ချဉ်၊ ကဖေး၊ ဒိန်ချဉ်) ကိုသောက်နိုင်သည်။
ပန်ကရိယရောင်နာရောဂါခံစားနေရသောလူနာများအတွက်တစ်ပါတ်ခန့်ဖော်ပြထားသောမီနူးသည်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် - တည်ငြိမ်သောလွှတ်လွှတ်မှုအဆင့်တွင်ခွင့်ပြုသောအခြားဟင်းလျာများနှင့်၎င်းကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်။
အဓိကအစားအစာများအကြား၌၎င်းသည်အသီးများသောသရေစာများနှင့်သကြားလုံးများကိုခွင့်ပြုသည်။ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်တူညီသောကြားကာလများတွင်အစာစားခြင်း၊ နေ့စဉ်အနည်းဆုံးရေ ၁-၁. ၅ လီတာသောက်ခြင်းနှင့်အစာမစားခြင်းအလေ့အထကိုဖွံ့ဖြိုးရန်အသုံးဝင်သည် - အစာစားပြီးလျှင်ငတ်မွတ်မှုအနည်းငယ်ဖြစ်သင့်သည်။